Nin qaatay 10 tallaal oo Covid ah hal maalin gudaheed! | Radio Himilo
Home / Arrimaha Bulshada / Nin qaatay 10 tallaal oo Covid ah hal maalin gudaheed!
Posted by: Ahmed Haaddi December 16, 2021
Himilo – Nin reer New Zealand ah ayaa la sheegay inuu helay 10 tallaal oo Covid-19 ah oo lagu duray hal maalin gudaheed, ka dib markii ay bixiyeen dad kale si ay u helaan tallaalka iyaga oo la matalayo.
New Zealand waxay ku socotaa waddadii ay ku gaadhi lahayd 90% tw0-dose tallaalka ka hor Christmas-ka, laakiin waxay wali la tacaalaysaa tiro muwaadiniin ah oo aan xitaa ku fikirin inay helaan shaqada. Si kastaba ha ahaatee, in aan la tallaalin waxay ka dhigan tahay ka tanaasulida xorriyadaha qaarkood ee loo qoondeeyay kaliya kuwa haysta shahaadooyinka tallaalka, qaar badanna ma rabaan inay taas sameeyaan.
Marka, waxaa lagu soo waramayaa inay isku dayaan inay hareer maraan nidaamka iyagoo lacag siinaya qof kale si ay u helaan tallaalka iyaga oo la matalayo. Iyo, qiimaha saxda ah, dadku waxay sida muuqata diyaar u yihiin inay helaan ilaa 10 qiyaasood oo tallaal ah oo lagu mudo jirkooda.
Toddobaadkii hore, mareegta wararka ee New Zealand Stuff ayaa ka warbixisay kiis naxdin leh oo nin aan la magacaabin oo la sheegay in laga tallaalay Covid-19 ilaa 10 jeer hal maalin gudaheed isagoo ka wakiil ah dadka kale, taasoo keentay baaritaan ay sameysay Wasaaradda Caafimaadka.
Qofka ayaa la sheegay inuu booqday dhowr xarumood oo tallaal oo ku yaal Auckland wuxuuna helay tallaalka Covid-19 dhowr jeer isagoo ka wakiil ah dadka kale ee bixiyay kharashka “adeegga”. Waxa uu awooday in uu tan fuliyo sababtoo ah, si loo helo tallaalka, qofku wuxuu u baahan yahay oo kaliya inuu siiyo shaqaalaha daryeelka caafimaadka magaciisa, taariikhda dhalashada iyo ciwaanka jireed. Aqoonsi sawir looma baahna
“Dadka aan haysan nooc ka mid ah aqoonsiga sawirka waa dadka si aan kala sooc lahayn oo ku jira kooxaha nugul – guri la’aanta ah ama ku meel gaar ah, waayeelo, dhallinyaro, dadka naafada ah – mana rabno inaan abuurno caqabadaha tallaalkooda,” afhayeen u hadlay ololaha tallaalka ayaa sheegay.
In kasta oo aanay jirin xog ku saabsan isticmaalka tallaalka habkan oo kale, haddana dhakhaatiirta tallaalka ayaa sheegaya in qofka aysan u badneyn inuu soo gaaro waxyeello halis ah. Waxay u badan tahay inay u baahan doonaan inay la tacaalaan waxyeellooyin aad u daran sida qandho, madax-xanuun iyo xanuun guud, laakiin ma jiraan wax aad u daran.
“Waan ognahay in qiyaaso badan ay ka dhashaan falcelino badan oo tallaalka ah, sida qandho iyo madax xanuun iyo xanuun, marka waxaad qiyaasi kartaa inuu si qurux badan u dareemi doono maalinta xigta,” Helen Petousis-Harris, oo ka tirsan Jaamacadda Auckland, ayaa tiri.
Previous: Maqal– Raxiiqul Makhtuum – Casharka 107aad
Next: 7-da xiddig ee ugu fiican ee lagu qasbay in ay ka fariistaan xilli hore ciyaaraha